Guddoomiye Mursal ” Somaliland waxay qorsheyaal gooni ah ku yeelandoontaa doorashada wakiiladeeda barlamaanka | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Guddoomiye Mursal ” Somaliland waxay qorsheyaal gooni ah ku yeelandoontaa doorashada wakiiladeeda...
Guddoomiye Mursal ” Somaliland waxay qorsheyaal gooni ah ku yeelandoontaa doorashada wakiiladeeda barlamaanka
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya, Maxamed Mursal Cabdiraxmaan, ayaa beesha caalamka ugudbiyay qoraal uu ku sheegayo in barlamaanku diyaarinayo qaab gaar ah oo loogu talagalay doorashada kuraasta Somaliland.
Qoraalkaan oo xafiiska guddoomiyaha ka baxay lixdii bishaan, ayuu kula hadlayaa, Midowga Yurub, Ingiriiska, Qaramada Midoobay iyo Mareykanka, isagoo u sheegaya in Somaliland qorsheyaal gooni ah ku yeelandoonto doorashada kuraasta wakiiladda matalaya barlamaanka soo socda.
Guddoomiyuhu waxa uu xusay in uu baarlamaanka si dhow ula shaqeyn doono guddiga qaran ee doorashooyinka, si loo ogaado loona xalliyo wixii farsamo ah ee saameyn ku yeelan kara dhaqan galka qaraarka Somaliland.
Qoraalka intiisa hore, waxaa guddoomiyaha barlamaanka beesha caalamka sharraxaad ka siinayaa sharciga cusub ee doorashooyinka ee dhawaan uu barlamaanku meel mariyay.
Halkaan hoose ka aqriso nuqul warqadda.
Previous articleCiidamada gaarka u tababaran oo howlgal gaar ah ku galay guryo ku yaal Muqdisho
Next articleXaaf oo qoraal xasaasi ah oo ka dhan ah DF u direy Beesha Caalamka